Homeसमाचारनुवाकोटमा भयो अचम्म, २८ वर्षीया सोमिका तामाङले एकै साथ जन्माइन् पाँच शिशु
October 5, 2020 admin समाचार 7702
थापा’थलीस्थित परोप’कार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्प’तालमा नुवा’कोटकी २८ वर्षीया सोमि’का तामाङले एकै साथ पाँच शिशु जन्माएकी छन् । उनले आज अस्पता’लमा शल्य’क्रियामार्फत पाँच शिशुलाई जन्माएकी अस्पताल’का निर्देशक डा सङ्गीता’कौशल मिश्रले जान’कारी दिए ।
तीमध्ये एक मृत जन्मि’एका छन् । बाँकी चार भने सकुशल छन् । उनका अनु’सार अहिले आमा र शिशुको अव’स्था सामान्य नै रहेको छ । “आमा र बच्चा’को अवस्था राम्रो छ । अक्सिजन दिनुपरेको छैन,” उनले भनिन्, “अहिले बच्चाह’रुलाई शिशु उप’चार सघन कक्षमा रा’खिएको छ ।”
डा मिश्रका अनु’सार एक महिला’बाट पाँच शिशु विरलै जन्मन्छन् । जीवित शिशुमा चार जना छोरी हुन् । ती शिशुमध्ये क्रमशः पहिलाको तौल १.८ किलोग्राम, दोस्रा’को आठ सय ग्राम, तेस्राको १.९ किलो’ग्राम र चौथाको १.६ ग्राम छ । डा मिश्रका अनुसार यसअघि तामाङको दुई पटक’सम्म शिशु नजन्मेर खेर गएको थियो ।
अस्प’तालका स्त्रीरोग वि’शेषज्ञ डा कीर्तिपाल सुवेदीको नेतृत्वमा डा दिप्ति श्रेष्ठ, डा नमिता सि’ङ्देन र डा मुकेश कु’मारले शल्यक्रिया गरेका थिए। -न्यूज24 बाट
बिनय कार्कीको ‘तिम्रै लागि’गीत सार्वजनिक (भिडियो हेर्नुहोस्)
ताप्लेजुङ दोभान बजारमा भिषण आ’गलागीः ३५ घर ज’लेर नष्ट (तस्विर सहित)
March 2, 2021 admin समाचार 2827
ताप्लेजुङको मेरि’ङ्देन गाउँपालिका—३ तथा जिल्लाकै दोस्रो ठूलो बजार दोभान बजारमा आ’गलागी भइरहेको छ । आज बिहान १० बजे भोला पौडेलका घरबाट विद्युत् चुहि’एर आगलागी भएको स्थानीयवासी गणेश कार्कीले बताउनुभयो । दोभान बजा’रमा अहिले ३५ घर
February 8, 2021 admin समाचार 3450
अब अण्डाको बोक्राले जोड्ने छ टुटेफुटेको हड्डी
November 8, 2020 admin समाचार 6007
मानिसहरु स्वस्थ रहन तथा भि’टामिन प्राप्त गर्न अण्डा खाने गर्छन् । यसक्रममा अण्डा’को बोक्रा भने त्यतिकै फा’लिन्छ । अण्डाको बोक्रा कुनै काममा प्रयो’ग गर्न पनि सकिँदैन । तर अब भने त्यसो नहुने भएको छ ।
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (204958)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196434)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (195934)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (193913)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192158)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191688)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184582)